लक्षणसहितका संक्रमित धमाधम थपिँदै, अस्पतालमा आइसियू र भेन्टिलेटरको चरम अभाव « Khasokhas KHASOKHAS ON GOOGLE NEWS CoronaVirus Fact Checking CoronaVirus News Update CoronaVirus: Stories of Hope CoronaVirus Resource Center File UI or PUA Claim Donate to Khasokhas KHASOKHAS E-MAGAZINE
लक्षणसहितका संक्रमित धमाधम थपिँदै, अस्पतालमा आइसियू र भेन्टिलेटरको चरम अभाव
हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु, पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, स्टार अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा संक्रमितको उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा। समीर अधिकारीले जानकारी दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बाग्मती प्रदेशमा १५ जना संक्रमित आइसियूमा उपचाररत छन् ।
सरकारले लक्षणविहीन संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा बस्न सकिने बताएको थियो । तर, अब बिस्तारै दैनिक लक्षण देखिएपछि बिरामीहरु अस्पताल पुग्ने गरेको र कोरोना परीक्षण गराउँदा संक्रमण पुष्टि हुने गरेको पाइएको छ । लकडाउन पूर्णतः अन्त्य भएपछि २ हजार २ सय ४१ जना संक्रमित थपिएका छन् । लकडाउन हटेपछि थप १६ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले बताए ।
चिकित्सकका अनुसार सावधानी नअपनाउँदा जोखिम बढेको हो । सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेसँगै हेलचेक््रयाइँ बढेको छ । संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा।अनुप सुवेदीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी हुन नसक्दा पनि संक्रमित बढेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले विज्ञको कुरा खासै सुन्दैन । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि बढ्न सकेको छैन ।’ उनले जोखिम कम गर्न सरकारले योजना ल्याउनुपर्ने बताए ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका प्रवक्ता डा. अनुप बास्तोलाले कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्न आम नागरिक सचेत हुनुको विकल्प नभएको बताए । सरुवा रोग विशेषज्ञसमेत रहेका प्रवक्ता डा. बास्तोलाले काठमाडौं उपत्यकामा संक्रिमतहरुको संख्या बढ्न थालेपछि आम मानिस त्रसित बनेको उल्लेख गर्दै सबैले सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।